Candy · Septambra 2009 · Global Voices teny Malagasy
Candy · Septambra, 2009
Febroary 2011 14 Lahatsoratra
Aogositra 2010 15 Lahatsoratra
Jona 2010 10 Lahatsoratra
Nanomboka nandika tamin'ny 17 Jolay 2009 · 428 Lahatsoratra
Currently doing multimedia studies, and translator for Global Voices Lingua Malagasy.
You can read her Malagasy blog here or her English blog here
Lahatsoratra farany an'i Candy tamin'ny Septambra, 2009
Global Voices sy ny Blog Action Day 2009
Hafanàm-po nomerika30 Septambra 2009
Global Voices dia blaogy mpiara-miasa ofisialin'ny Blog Action Day amin'ny 15 Oktobra, andro iraisana hihetsehana izay iraisan'ireo mpitoraka blaogy rehetra hina hanoratana momba ny fiovaova'ny toetr'andro.
Filipina: Tondra-drano an-tsarimihetsika nataon'ireo mpampiasa aterineto
Filipina30 Septambra 2009
Ampahantsary maro avy amin'olon-tsotra no nandrakitra ireo fahavoazana sy faharavana nentin'ny rivo mahery tropikaly izay namely ny Metro Manila sy ny faritany manodidina azy akaiky tany Philippines tamin'ny Alahady lasa teo.
Porto Rico: Adihevitra momba ny sivana
Amerika Latina28 Septambra 2009
Ny Ministeran'ny Fampianaran'ny governemantan'i Porto Rico dia nanala boky dimy amin'ny fandaharam-pianaran'ny taona faha-11 ao amin'ny rafi-pampianaran'ny sekolim-panjakana. Maro ireo mpanoratra sy mpanakanto any Porto Rico no naneho ankarihary ny olany ary nandray ny fihetsiky ny governemanta ho sivana. Mihetsika noho izany fifanoheran-kevitra izany ny tontolon'ny blaogy ao Porto Rico.
Aceh, Indonezia: Hovonoina amin'ny tora-bato ireo mpijangajanga
Indonezia22 Septambra 2009
Vaovao ratsy ho an'ireo manambady nefa mijangajanga : ny 'Aceh Regional House of Representatives' dia namoaka lalàna fanamelohana ho faty ho an'ireo manambady nefa mijangajanga . Hovonoina amin'ny alalan'ny tora-bato ireo meloka.
Myanmar: Pôlitika vaovao mitaky ny fisoratan'anaran'ireo vondrona miady amin'ny VIH
Myanmar (Birmania)16 Septambra 2009
Ny Ministeran'ny Fahasalamana any Myanmar dia mitaky ny fisoratan'anaran'ireo vondrona miady amin'ny VIH raha te-hiasa any an-toerana ireto farany. Matahotra ny sasany sao dia ampiasaina "hifehezana" na hanimbana ny fahaleovantenan'ireo vondrona mpilatsaka an-tsitrapo any Myanmar ity pôlitikan'ny governemanta vaovao ilàna ny fisoratana anaran'ireo vondrona miady amin'ny VIH ity.
Pakistana13 Septambra 2009
Niteraka adihevitra mafana teo amin'ny tontolon'ny blaogy Pakistane ny fahafatesan'ilay Pakistane iray mpandray anjara tamina seho mivantana. Mpitoraka blaogy maro no manontany momba ny fisian'ireny karazana seho fialamboly ireny, izay tsy ampy fepetra fiarovana, ary ny andraikitr'ireo vondrona vaventy izay manohana azy ireny.
Maraoka09 Septambra 2009
Niteraka resa-be tao amin'ny tontolon'ny blaogy Maraokana ny lahatsoratry ny BBC News iray momba ny fampianarana ny “teny Berbery” any Maraoka. Ilay lahatsoratra, izay manasongadina ireo safidim-mpampianarana hianarana sy handalinana ilay fiteny, sy manome fanazavana momba ny fivoaran'ny alfabeta Tifinagh, dia niteraka karazan-dahatsoratra maro. Mitantara i Jillian C. York.
Etazonia, Meksika: Mi-tweet avy eny an'habakabaka ilay mpanamory sambondanitra José Hernández
Amerika Avaratra07 Septambra 2009
Eo am-piodinana manodidina ny tany izao ilay mpanamory sambondanitra José Hernández ao anatin''ilay iraka ataon'ny sambondanitra ho eny amin'ny Toby an'habakabaka iraisampirenena, ary mi-tweet izy mandritra ity iraka ataony ity..